Nraranye nke ụbọchị: ịlaghachi n'ime mmehie
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 28, 2020 Ọktoba 28, 2020
Otu onye ada ada n'ihi adighi ike. Ndụ anyị na nkwupụta anyị bụ ihe na-aga n'ihu na nzube na nlọghachi. Lee mmechuihu ọ bụ n'ihi mpako anyị! Lee ka ikpe ikpe Chineke na-aghaghị isi kpalie anyị! Ma oburu na itinye aka nke oma n’imeri oke ochicho ahu, izere onwe gi n’azu agwa ojo a, ma o buru na i nyere onwe gi aka n’ekpere, iku ume, na sacramenti, ma laghachi azu: echegbula onwe gi: nke a ka Chineke kwere; na-alụ ọgụ. Chineke ga-agbaghara adịghị ike gị.
Otu na-ada n'ihi nleghara anya. Onye ụra na-achọ achọghị, ọ na-ewelite isi ya wee daa ọzọ; ... ya mere ndị keara ,ara, ndị nleghara anya. Taa ọ na-atụ aro ma na-eguzosi ike; ma ọ na-efu nnukwu ego mgbe nile ịlụ ọgụ; mmekpa ahụ, ikpe ekpere, ịhapụ oge ahụ abụghị ihe megidere uche ya; takes ọ na-esiri ụzọ ọ ga-esi hapụ ya n'oge na-adịghị anya; na-atụ aro ime nke ọma echi, ma ugbu a taa dara. Nke a bụ nleghara anya ikpe mara. Ikwenyere n’Onyenwe ayi na ngaghara gi?
Mmadu daa n’onwe ya site n’echiche ya. Otu ihe a na-eme ndị ahụ nọ n'etiti ihe egwu, ndị tụkwasịrị obi n'ike nke aka ha, ndị hụrụ n'anya karịa igosipụta agụụ ha karịa ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, nye ndị na-anaghị eme usoro akọ na uche na-atụ aro n'agbanyeghị na ha nwere nsogbu, ndị na-atụ aro, mana o kwenyesiri ike na ya agaghị edebe onwe ya… Enweghị obi ụtọ! akaha ga-achọpụta na ọ bụ ya kpatara nsogbu ahụ. Chee echiche banyere ya ma gbanwee ndụ gị.
OMUME. - Gụọrọ ndị nsọ niile Pater, Ave, na Gloria atọ iji nweta ntachi obi
Nke gara aga Post Gara aga post:Chee echiche na oku ị na-eso Kraịst ma mee ka onyeozi Ya n'ụwa
Next Post → Post ozo:Nsọpụrụ Jizọs: amara ndị metụtara aha nsọ ya